टिपनटापन Archives - Page3of 21 -
वर्षायाममा पोलेको मकै खानुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । पोलेको मकै स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि निकै स्वस्थ मानिन्छ । तर यदि तपाईंले पोलेको मकै खाएलगत्तै पानी पिउनुहुन्छ भने यो निकै हानिकारक साबित हुनसक्छ । आयुर्वेद विशेषज्ञ डा. आशुतोष गौतमका अनुसार पोलेको मर्क खाएलगत्तै पानी पिउँदा पेटसम्बन्धि विभिन्न समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यसले ग्याष्ट्रिकको समस्या र पेट दुख्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ । पोलेको मकै खाएलगत्तै पानी पिउँदा… पुरा पढौ
थुप्रै देशका सरकारले धेरै बच्चा जन्माउँदा नागरिकलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने गर्छ तर काजकिस्तान यी देशभन्दा सबैभन्दा माथि छ । काजकिस्तानमा ठूलो परिवारलाई निकै महत्व दिइँदैछ । यहाँको सरकारले परिवारमा धेरैभन्दा धेरै बच्चा होस् भन्ने चाहेको छ । त्यसकारण यो देशको जन्मदर बढाउन योगदान दिने आमालाई ‘हिरो मदर्स’ को तक्मा दिइन्छ । कुनै परिवारमा ६ जना बच्चा भए आमालाई रजत पदक दिइन्छ । सात वा सोभन्दा बढी बच्चा जन्माउने आमालाई स्वर्ण… पुरा पढौ
मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक खाने कुरा हो मह । यसको माग पनि बजारमा यही कारणले धेरै हुने गर्छ । यही आवश्यकताका कारण अर्गानिक मह भन्दै बजारमा नक्कली महको बिगबिगी पनि धेरै छ । महको शुद्धताबारे जानकारी नभएकाहरु बजारमा विभिन्न बाहामा ठगिने गरेका हुन्छन् । चिनी पानीमा मौरीको चाका भिजाएर ‘शुद्ध मह’ भन्दै बेच्ने गरिन्छ । आफ्नै अगाडि चाकाबाट निकालेको मह भएकोले त्यसलाई धेरैले विश्वास गर्ने गर्छन् । त्यसैले अर्गानिक र… पुरा पढौ
मखमली फूलको सांस्कृतिक महत्व
मखमली फूल नोपालीहरुको लागि सांस्कृतिक महत्व बोकेको प्रसिद्ध फूल हो । मखमली फूल कहिले न ओइलिने भएकोले यसलाई दिर्घायु र स्वस्थ जीवनको प्रतिकको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले यस फूलको माला तिहारको अवसरमा दिदिबहिनीले दाजुभाइको लामो आयुको कामना गरी लागाइदिन्छन् । संस्कृतमा रक्त मल्लिका भनिने यो फूूल देख्नमा पनि सुन्दर भएकोले सन् १८५५ मा जङ्ग बहादुरले बेलायत पठाएको उपहारमा पनि परेको थियो । त्यस समयमा यो नेपालमा प्रसिद्ध रहेको र भारतमा… पुरा पढौ
आजभन्दा हज्जारौं वर्ष पहिले यस पृथ्वीमा अति घना जंगलहरु थिए । ती जंगलहरुमा विशालकाय स्तनपायी जनावरहरु विचरण गर्ने गर्थे । त्यति बेला मानिस आजको जस्तो विकसित मानिस थिएन । त्यतिबेलाको मानिस जंगली अवस्थामा थियो । उनीहरु जंगली जनावरहरुको छालाले आफ्नो शरीर ढाक्ने गर्थे । उनीहरुको जीवनचर्या भनेकै अन्य जंगली जीवजन्तुहरुको शिकार गर्ने र पेट पाल्नेमा सीमित थियो । उनीहरुले जनावरलाई घरपालुवाको रुपमा फेर्न सिकेका थिएनन् । ठीक त्यति बेला मानिसको… पुरा पढौ
सबैभन्दा उत्कृष्ट सेल्सम्यान कसरी बन्ने ?
भनिन्छ, बिक्री (सेल) गर्नु पनि एक प्रकारको कला नै हो । ‘बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’ भनेजस्तै यो थोरै हठी र थोरै धेर्यमा रहेर खेलिने ‘खेल’ पनि हो । मानिसहरु आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नका लागि ‘म तालु खुइलिएको मानिस (टक्लु)लाई पनि कांगियो बेच्न सक्छु’ भन्छन् । यो पनि एक आत्मविश्वास र उत्साह हो । आफूमा भएको कलालाई आत्मविश्वास र उत्साहका साथ प्रदर्शन गर्न सकियो भने तपाईंले होली… पुरा पढौ
सौन्दर्यका लागि हामी बिहान घरबाट बाहिर निस्कने बेला पनि अनुहारमा क्रिम लगाउँछौं भने राति सुत्ने बेलामा पनि क्रिम लगाएर सुत्छौं । बिहान लगाउने क्रिमलाई ‘डे क्रिम’ भनिन्छ भने राति लगाउने क्रिमलाई ‘नाइट क्रिम’ । तर, हामीमध्ये धेरै जनालाई डे क्रिम र नाइट क्रिमका बारेमा हुने अन्तरका बारेमा जानकारी नै हुँदैन । हामीमध्ये कतिपय राति सुत्ने बेलामा पनि क्रिम लगाएर सुत्छौं । हामीमध्ये धेरै जनालाई ‘डे क्रिम’ र ‘नाइट क्रिम’का बारेमा… पुरा पढौ
कयौंपटक बढ्दो काम र लामो समय छुट्टी नलिई लगातार काम गर्नाले मानिसलाई कामको दबाव हुन्छ । कतिपय संस्थाका हाकिमहरु लगातार ८ घण्टा काम गरेको कर्मचारीले घरमा गएर पनि काम गरिदियोस् वा अझै लामो समय अफिसको लागि काम गरिदिओस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा मानिसहरुले आफ्ना नजिकका मानिसहरुको लागि समय निकाल्न पाउँदैन । यसले मानिसलाई लगातार तनावको स्थितिमा पुर्याउँछ । हुनत तनावलाई मान्छेले खासै समस्याको रुपमा लिएको हुँदैन । तर त्यहि… पुरा पढौ
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको उपनिर्वाचनको लागि दल दर्ता गराउन आह्वान गरेको छ । आयोगका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलले दल दर्ता गराउनु पर्ने छैन । तर, सोही ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ नाममा दर्ता भएका दलहरुले भने दल… पुरा पढौ
आफ्नै छोरी नभन्ने यस्ता पतित पिता…
नवलपरासी जिल्लामा ६० बर्ष उमेरका ठुला बाबुले ११ वर्षीया भाईकी छोरीलाई बलात्कार गरेका छन् । बाबु–आमा दुबै सम्पर्कविहिन भई बेसहारा बनेकी ११ वर्षीया बालिका विवसता–२ (नाम परिवर्तनलाई ) आफैले संरक्षण दिएर राखेका जेठा बाबु सुनवल नगरपालिका वडा नम्वर ४ का ६० बर्षीय कलंकराम (नाम परिवर्तन ) गत एक महिनादेखि बलात्कार गर्दै आएको आरोपमा आज पक्राउ परेका हुन् । नवलपरासीका प्रहरी प्रबक्ता डिएसपी बीरेन्द्र थापाका अनुसार उनले पैसाको प्रलोभन समेत देखाउँदै… पुरा पढौ